Alkemy X သည် Rich Shurtliff ကို IT ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Alkemy X ကိုဘုံဘိုင်အိုင်တီဒါရိုက်တာအဖြစ် Rich Shurtliff
Alkemy X ကိုဘုံဘိုင်အိုင်တီဒါရိုက်တာအဖြစ် Rich Shurtliff
အင်ဂျင်နီယာ Bob က Pyle ၏အနားယူ VP အဘို့ကိုကျော်ယူဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာ။
NEW YORK CITY- Premiere ဖန်တီးမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီ Alkemy X ကိုယနေ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ် Rich Shurtliff ၏ရက်ချိန်းကြေငြာလိုက်သည်။ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အိုင်တီအတွက်နက်ရှိုင်းသောအတှေ့အကွုံစေသော Shurtliff, ယင်း၏ Philadelphia တွင်နယူးယောက်မှာကုမ္ပဏီ၏သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာမဟာဗျူဟာ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စစ်ဆင်ရေးကိုကြီးကြပ်မည်အကြောင်း, Los Angeles မြို့ စတူဒီယို။ သူဟာနီးပါး 30 နှစ်ပေါင်းများအတွက် post ကိုကျင်းပသူအနားယူဘော့ Pyle, အောင်မြင်။
"Alkemy X ကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုမောင်းထုတ်ရန်နည်းပညာ၏ဦးဆောင်အစွန်းမှာအလုပ်လုပ်, ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံရေးတစ်ဦးရှည်လျားသောအစဉ်အလာရှိပါတယ်," Alkemy X ကို CEO ဖြစ်သူကို Justin Wineburg ကဆိုသည်။ "ချမ်းသာတဲ့အနေနဲ့အတော်လေးကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီဧရိယာ၌အတွေ့အကြုံကိုရှိပြီးကြီးမားသော, Multi-site ကိုထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော်, တီထွင်န်ဆောင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးထွားလျက်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ထူးချွန်ကယ်နှုတ်တော်မူဆက်လက်သေချာပါလိမ့်မယ်။ "
Alkemy X ရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်မှု, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်မှု, Non-linear အယ်ဒီတာအဖွဲ့, အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှု, အရောင်အဆင့်နှင့်အခြားအလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အစအဆုံးအကုန်ပြေး။ New York မှာအခြေခံပြီး, Shurtliff, လုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းသိမ်းခြင်းအသစ်သောနည်းပညာတွေနှင့်အဆင့်မြှင့်အကောင်အထည်ဖော်နှင့်အနာဂတ်တိုးတက်မှုအတွက်စီစဉ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ "ကျနော်တို့ကအရမ်းအားကောင်းတဲ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်သုံးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ဝေ Post-ထုတ်လုပ်မှုဌာနများရှိသည်," Shurtliff ကပြောပါတယ်။ "အဲဒီအရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အဆိုပါအလုပျထိပ်တန်းထစ်သည်။ "
Shurtliff ယခင်က Studio6 တစ်ဦးက New York ဖန်တီးမှုအကြောင်းအရာကုမ္ပဏီအတွက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စတူဒီယိုအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မိမိအနောက်ခံလည်း R ကို / GA, RhinoFX နှင့် Curious ရုပ်ပုံများနှင့်အတူအကြီးတန်းအိုင်တီအခန်းကဏ္ဍပါဝင်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားဇာတိကယ်လီဖိုးနီးယား, Irvine တက္ကသိုလ်ကနေလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဒီဂရီရှိပါတယ်။
Pyle 1990 အတွက် Alkemy X ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာကုမ္ပဏီနည်းပညာမရေမတွက်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုသူများထဲတွင်သူ 2011 အတွက်နယူးယော့ခ်မှကုမ္ပဏီ၏တိုးချဲ့၏နည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် Los Angeles မြို့ 2018 ၌တည်၏။ သူလည်းပစ်လွှတ်နှင့်လက်ရှိ AMC ရဲ့ကဲ့သို့သောပြပွဲများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုန်ဆောင်မှုပေးပါသည်ရာက၎င်း၏အမြင်သက်ရောက်မှုဌာနခွဲများ၏ကြီးထွားမှုကိုကြီးကြပ် အဆိုပါ Walking Dead ကိုကွောကျရှံ့ အား NBC'' s ကို Blindspot, HBO ရဲ့ အဆိုပါစားကြွင်းစားကျန်, Netflix နဲ့'' s ကို အရူး နှင့် Amazon ရဲ့ အဆိုပါအံ့ဖွယ်မစ္စစ် Maisel.
"Alkemy X ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့နေရာကောင်းတခုဖြစ်ခဲ့သည်; ငါကအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမိနစ်ခံစားကြပါပြီ, "Pyle ကဆိုသည်။ "ပြောင်းလဲနေတဲ့နည်းပညာနှင့်အတူအရှိန်အဟုန် Keeping စိန်ခေါ်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ခဲ့ဖူးတဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်ကျွန်တော်ကိုအပ်ထားသောများစွာသောအကြီးစီမံကိန်းများတွင်အကြီးအစိတ်ကျေနပ်မှုယူပါ။ "
Pyle ချောမွေ့အကူးအပြောင်းကိုသေချာစေရန် Shurtliff အတူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ "Rich နဲ့ကျွန်မနည်းပညာဆီသို့တူဒဿနရှိသည်," Pyle ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မရှိမဖြစ်သောအရာ, အသိပညာများအတွက်ရေငတ်မျှဝေပါ။ သငျသညျနည်းပညာ၏ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့အစဉ်မပြတ်ရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
Alkemy X ကိုအကြောင်း:
Alkemy X ကိုအမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်, ကွန်ယက်ဖန်တီးမှု, ဘက်ပေါင်းစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ် / လူမှုရေးအစပျိုး long-form ကို unscripted ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode TV နဲ့ကြော်ငြာများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှု။ မူရင်းယူနစ်မကြာသေးမီက unscripted အထူးထုတ်လုပ် အဆိုပါမင်းလမ်းငါ့ကို Down ဆွဲပါ TLC အဘို့။ Advertising ကြော်ငြာနှင့် branded အကြောင်းအရာ clients များ BMW ကား, Pepsi, Panera, Lexus, Google နဲ့ Samsung တို့ပါဝင်သည်။ အထူးနှုန်းများ, ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်လူမှုရေး clients များ Nickelodeon, Syfy, AMC, TruTV နှင့်စားနပ်ရိက္ခာကွန်ယက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါ VFX အဖွဲ့ AMC ရဲ့အပါအဝင်စီးရီးအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ် အဆိုပါ Walking Dead ကိုကွောကျရှံ့ အား NBC'' s ကို Blindspot, HBO ရဲ့ အဆိုပါစားကြွင်းစားကျန်, Netflix နဲ့'' s ကို အရူး နှင့် Amazon ရဲ့ အဆိုပါအံ့ဖွယ်မစ္စစ် Maisel.
New Post New York Alliance (PNYA) ကို“ Post Break” Webinar တွင် NYC အရောင်ခြယ်မှုန့်များ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ထားရန် - စက်တင်ဘာလ 15, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပြောင်းရွှေ့အပေါ်လူတွေ SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-06-28
ယခင်: Hitachi Kokusai ကနေ Z-HD5500 HDTV ကင်မရာများကိုနှင့်အတူ Westgate ဘုရားကျောင်း Enhancer Multi-ကျောင်းပရဝုဏ်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို Delivery
နောက်တစ်ခု: ရုပ်ရှင်ပွဲတော် & ဗီဒီယို Editor ကို